Fa maninona ireo mpivarotra no tsy mihazakazaka mankany Jaiku? | Martech Zone
Saturday, May 19, 2007 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
Raha mbola tsy naheno momba ny fitorahana bilaogy bitika ianao dia afaka mitsidika ny tranokalako ary mijery eo amin'ny sisin-tranoko misy azy hoe: "Doug on Jaiku". Ny bilaogy bitika dia mandefa fanambarana fohy mahaliana sy / na ny toerana misy anao. Ireo mpilalao roa lehibe eo amin'ny tsena dia toa izy ireo Twitter ary Jaiku. Misy fahasamihafana misimisy ao amin'ireo serivisy roa ireo, saingy mpankafy an'i Jaiku aho noho ny fahaizany mampiditra. Vao tsy ela akory izay no nametrahako ity andraikitra ity tamin'ny WordPress Plugin ho an'ny Jaiku izay vao nandalo fampidinana 500 androany maraina!
Marketing any Jaiku:
Ny tena nahagaga ahy ny momba ny Twitter, ary indrindra ny fananganana Jaiku dia ny mbola tsy nahatratra ireo mpivarotra. Karazana moana io raha toa ka manontany ahy ianao, raha mpivarotra aho dia hampiasa ity teknolojia ity tanteraka. Woot dia tranonkala nahomby tamin'ny fomba mahavariana, manolotra fifanarahana tokana isan'andro. Jungle Crazy dia tranonkala iray hafa izay toa manana tongotra, manome a RSS ahafahanao misoratra anarana ary mahazo ny fifanarahana tsara indrindra. Ny tsaho dia milaza an'izany Mandinika ny Twitter ny Delta Airlines, fa amin'ny fijerena ny pejin'izy ireo - toa tsy misy ilana azy ny valiny.
Raha kaompaniam-pitaterana an'habakabaka aho, dia ataoko mandeha ho azy ny fandefasana specials ho an'ny olona, ​​mifandraika amin'ny toerana misy azy, ny Jaiku Feeds. Alao an-tsaina izany Indianapolis-UA.jaiku.com izay ahafahako misoratra anarana ary mahita ireo miavaka farany mipoitra ao amin'ny mpamaky fahana amiko. Na angamba junglecrazy.jaiku.com na koa woot.jaiku.com. Aiza ny dell.jaiku.com na sony.jaiku.com? Salama? Inona no ataonareo Mpivarotra any? Ity dia fotoana mety hitrandrahana tetikady vaovao ary matory amin'ny kodia daholo ianareo!
Fampiasana fanampiny eo ivelan'ny Marketing:
Fanaraha-maso - Alao sary an-tsaina hoe mpamatsy fampiantranoana ianao ary te handefa lahatsoratra fampahalalana momba ny fahatapahan'ny rafitra na ny fikojakojana. Maninona raha manana jumpline.jaiku.com na dreamhost.jaiku.com izay Dreamhost na Jumpline fampiantranoana mamelona ny satan'ny rafitra farany? Ny ampahany mahafinaritra amin'izany dia ny fampiantranoana an'i Jaiku any amin'ny toeran-kafa… amin'izay dia afaka mivoaka any foana ny satan'asa.
911 ao amin'ny Jaiku
Fandrahonana ho an'ny fiarovana ny tanindrazana ao Jaiku
Vaovao momba ny tahiry ao Jaiku
Fanairana momba ny tadio eo Jaiku
Aiza daholo ianareo olona? Mifohaza! Manana hevitra hafa ve ianao?
May 19, 2007 ao amin'ny 3: 16 PM
Tena maniry Woot.Jaiku.com tokoa ve ny olona? Efa afaka mahazo sakafo amin'ny tranokalan'izy ireo ianao. Doug, heveriko fa tsy tsotra toy ny fitadiavana fomba hafa hampiroboroboana ny vokatrao / serivisinao amin'ny besinimaro. Ny hevitra momba ny jumpline na orinasa mpampiantrano hafa dia mahafinaritra, saingy tsy mety amin'ny rehetra izany.
Fox's Drive efa mampiasa Twiiter ary mandeha izany. Ampiasain'izy ireo ho fomba hamoronana fiaraha-monina manodidina ny seho izany, fa ny tena zava-dehibe, ho an'ireo izay tafiditra ao anaty fiara ihany koa. Heveriko ho an'izay rehetra ao amin'ny marketing izay te hampiasa Twitter na Jaiku, tokony hiezaka ny hamorona vondrom-piarahamonina kely izy ireo fa tsy hanary menatra ny vokatr'izy ireo fotsiny. Fa izany no 2centsako.
May 19, 2007 ao amin'ny 10: 15 PM
Ekeko fa mila tafiditra ao anatin'ny paikady ankapobeny izy io. Gaga fotsiny aho fa efa nipetraka nandritra ny fotoana kelikely ny teknolojia, nahazo fiheverana betsaka, fa ny mpivarotra kosa tsy nampiasa izany tamin'ny fomba famoronana. Mpino 'Strategie Marketing Integrated' aho - ary ity dia singa iray hafa azo ampiana amin'ny piozila!
Raha ny momba an'i Woot, heveriko tanteraka fa ho fandondonana izany! Raha ny marina, raha izaho no Twitter na Jaiku, dia manandrana mitady zavatra hiaraka amin'izy ireo aho izao!
May 20, 2007 amin'ny 9: 15 AM
Miaraka aminao aho Douglas. Nolazaiko tao amin'ny bilaogiko kelikely io, na dia miresaka manokana momba ny Twitter aza aho tamin'izay.
Ny geeks Alpha toa ahy sy ianao dia mandray teknolojia vaovao toa ny jaiku sy twitter haingana ary mahita avy hatrany ireo fotoana mety. Mampalahelo fa miaina ivelan'ny sisiny isika, ary maharitra elaela vao hahatratra ny sisa amin'ny tontolo.
Heck, izao vao takatry ny orinasa ny maha-zava-dehibe ny bilaogy!
May 20, 2007 ao amin'ny 7: 59 PM
Mijanona tsy miankina amin'ny herinandro aho ary manomboka amin'ny maso ivoho. Ny asako dia ny miaina eo an-tsisin-dàlana ary mitondra zavatra toa ny twitter / jaiku eo amin'ny latabatry ny orinasa. Manantena aho fa ny alpha geek cred dia mahazo ny maso ivoho doka hampiasa ireo fironana / teknolojia mandeha haingana kokoa. Tsy ho mora izany fa azo atao.
May 20, 2007 ao amin'ny 9: 45 PM
Mirary soa indrindra, Duane! Mampientam-po foana ny fanombohana vaovao.
May 21, 2007 amin'ny 10: 04 AM
Misaotra Doug. Faly be aho fa afaka miaina SY miasa eto afovoan-tanàna ankehitriny.
May 21, 2007 amin'ny 10: 50 AM
Salama Doug - lahatsoratra tsara izay nanokatra ny masoko hahita ny mety hisian'ny Twitter. Ekeko fa haingana dia haingana aho no nitsara azy io ho fandaniam-potoana fotsiny… ny lahatsoratrao momba ny mety hampiasana bilaogy bitika avy amin'ny fomba fijery marketing dia eo no eo… nanova ny hevitro ianao ary hanao andrana aho miaraka amin'i Twitter sy Jaiku vokatr'izany.
Te hisaotra anao ihany koa aho tamin'ny rohy nisy lahatsoratra vitsivitsy niverina - Teo afovoan'ny bilaogy aho nifindra tany amin'ny WordPress ka izany no antony tsy namaliako haingana. Raha manana vintana ianao dia zahao ny bilaogiko nohavaozina ao amin'ny: http://www.smallbusinessmavericks.com/internetmarketing - Te handre izay eritreretinao aho. (Azonao jerena ihany koa ny lahatsoratra androany izay ampifandraisiko amin'ny bilaoginao sy ity lahatsoratra ity ao amin'ny Jaiku manokana).
Misaotra tamin'ny bilaogy nahafinaritra - tohizo ny atiny tsara!
May 21, 2007 ao amin'ny 12: 33 PM
Tiako ilay endrika vaovao! Izaho dia nanangana ny tranokalako tamin'ny lohahevitra tsy miova (raha tsy afaka milaza ianao). Misaotra betsaka amin'ny teny soa!
May 21, 2007 amin'ny 11: 29 AM
Izahay dia niezaka namantatra ny fomba fampiasana Twitter hivarotra ny ekipa baseball tohanan'ny orinasanay (www.unitedlinen.com) sy ny marketing amin'ny fifaninanana Baseball izay nomena anarana araka ny anarantsika. Izahay dia mieritreritra ny handefa naoty tena izy amin'ny fiafaran'ny fidiram-bola tsirairay mandritra ny torimaso mandritra ny 5 andro ary koa ny fandefasana isa ho an'ny ekipa baseball mandritra ny vanim-potoana misy azy ireo.
Izahay dia miezaka mamantatra ny fomba hilazana amin'ny olona ny fomba hahatongavany ao amin'ny twitter sy ny zavatra tokony hataon'izy ireo mba ho mpanaraka ny ekipa sy amin'ny fifaninanana. Namorona solonanarana ULBraves tao amin'ny Twitter izahay, saingy izany dia manodidina ny faritanay. Miezaka izahay…
May 21, 2007 ao amin'ny 12: 39 PM
Fomba tsara hampiasana azy! Azonao atao ny manao dokam-barotra momba ny Twitter sy ny URL-nao ary mandefa ireo isa ireo ao amin'ny pejy fandraisana anao amin'ny alàlan'ny API azy ireo amin'ny fotoana tena izy! Ampahafantaro ahy raha mila tanana ianao - izany dia fanandramana mahafinaritra!
May 21, 2007 ao amin'ny 3: 14 PM
Mamaky ny bilaogiko ve i Woot?
May 22, 2007 amin'ny 12: 12 AM
Toy ny ankamaroan'ny lahatsoratra momba ny mety ho varotra tsy mampino an'ny Twitter et al, ity iray ity dia tsy afaka mamorona zavatra ilaina rehetra hatao aminy izay tsy azo atao mora kokoa - ary tsy afaka mahatratra olona maro kokoa - miaraka amin'ny media hafa.
Firy ny mpivarotra no tena tian'ny olon-tsotra handefa tweet ho azy ireo amin'ny findainy? Ny iray amin'ireo mpaneho hevitra anao dia nanondro ny olona manao zavatra mety amin'ny Twitter - mampiasa azy io ho fitaovana fananganana vondrom-piarahamonina - saingy asa mafy izany ary mitaky famoronana sy eritreritra kely. Raha toa ny fehezantenin'ny lahatsoratrao sy ny ohatra asehonao dia toa «hey, andao atsipy amin'ny sehatra microblogging daholo ny zava-drehetra ary jereo izay miraikitra! manatona.
Ary farany, misy ny antony mahatonga ny ankamaroan'ny mpivarotra tsy mihazakazaka mankany amin'ny Jaiku sy Twitter: te hiresaka amin'ny mpanjifany izy ireo, izay tsy mampiasa ireo zavatra ireo ny ankamaroany. Tsy misy olona mankafy teknolojia izay tsy ampiasain'ny ankamaroan'ny mpanjifany ary toa tsy liana izy ireo.
May 27, 2007 amin'ny 12: 31 AM
Fanamarihana iray… Woot dia mijery ity teknolojia ity!
Woot amin'ny Jaiku
7 Aogositra 2007 amin'ny 4:40 PM
Fanontaniana manantena fa afaka mamaly na mitarika ahy amin'ny làlana tsara ianao. Manana tranokala ho an'ny tanora aho amin'ny programa afterschool eo an-toerana izay tadiaviko hampiasa twitter.
1. Manana pejy "mivantana" izahay miaraka amin'ny fanantenana fa afaka manana mpianatra maro handefa hafatra ao aminy izahay avy eo ary afaka hiparitaka amin'ny efijery miaraka amina tetik'asa.
2. Te ho afaka hampiasa an'ity rafitra ity ihany aho amin'ny fanaovana kaonferansa izay ahafahan'ny mpianatra / olona mametraka ny eritreriny na ny heviny amin'ny kaonty twitter ary araka ny voalaza teo aloha, vinavinaina amin'ny rindrina ho hitan'ny rehetra mivantana izany. Ampahafantaro ahy raha manana hevitra ianao.
7 Aogositra 2007 amin'ny 7:19 PM
Azo natao mora foana izany. Izaho dia manana kaody santionany izay azonao atombohana.
Hanao Channel Jaiku fotsiny aho dia afaka manasa ny mpianatrao rehetra ho ao amin'io Channel io ianao. Izay rehetra avoakan'izy ireo dia azo aseho - na amin'ny alàlan'ny fisintomana ny Channel na amin'ny fampisehoana ny RSS feed!